RHODESIAN RIDGEBACK DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Bryaba waxay tiri Whatchamacallit aka Shisma, beerka sanka, sarreenka casaanka Rhodesian Ridgeback at 3 sano jir
Liiska eyda Rreedesian Ridgeback Mix
Bog furahaagu ma taageerayo sumadda maqalka.
Rhodesian Ridgeback waa qashin weyn oo muruqyo ah. Madaxa ballaadhan ayaa ku siman dhegaha dhexdooda. Afku waa dheer yahay oo qoto dheer yahay, oo leh joogsi qeexan. Sanka waa madow, bunni ama beerka, waxay kuxirantahay jaakada eyga. Noocani wuxuu mararka qaarkood leeyahay carrab madow. Indhuhu way wareegsan yihiin oo badanaa waa bunni, waxay kuxirantahay hadhka eeyga. Dhegaha dhexdhexaadka ah ayaa sare loo taagay, hoos ayey u dhacayaan, weynaanayaan salka waxayna ku foorarayaan hal dhibic. Laabta ayaa qoto dheer. Lugaha hore waa inay ahaadaan kuwo aad u toosan oo xoog badan. Dabada ayaa si cadaalad ah u dheer, dhumuc weyn salka, hoos u dhigaysa dhibicna kor u qaloocaysa wax yar. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Koodhku waa gaaban yahay oo cufan yahay leh timo muuqaal ah oo si cad loo qeexay oo timo koraya dhinaca ka soo horjeedka xagga dambe ee dhabarka. Midabada koofiyaddu waxay ka kooban yihiin sarreen khafiif ah illaa midabbada casaanka mararka qaarkood oo waxyar oo cad ka hooseeya laabta iyo suulka iyo madow. Madoowga Rhodesian Ridgebacks madow waa dhif laakiin mararka qaarkood way dhacaan.
Ugaadhsade wanaagsan, Rhodesian Ridgeback waa ku xun yahay ugaarsiga, laakiin guriga dhexdiisa waa degganaan, debecsan, adeecsan, eey wanaagsan. Waa dabeecad wanaagsan, laakiin qaarkood si fiican ugama fiicna carruurta yar yar maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay si aad ah u ciyaaraan oo ay iyaga dumiyaan. Iyagu waa eeyo caqli badan, xirfad leh oo toos u socda oo daacad u ah qoyska. Waa geesiyaal iyo feejignaan. Laguma hayn karo shisheeyaha, sidaas darteed si wanaagsan ula dhaqan bulshada. Waxay leeyihiin tabar aad u tiro badan oo aan ku filnayn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay noqon karaan kuwo sare oo aan la maarayn karin. Noocani wuxuu ubaahan yahay shirkad, kalsooni, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada yaa bixin kara xeerarka eygu waa inuu raaco iyo xaddidaadda waxa ay sameyn karto iyo wixii aysan sameyn karin. Milicso iyo / ama milkiileyaal dadban, ama milkiileyaal yaa ula dhaqan eyga sida aadanaha halkii ayn ku jiri lahayd dhibaato adag in la xakameeyo tarankaan sidoo kale waxay sababi kartaa inay la dagaallamaan eeyaha kale. Markii la siiyo waxa ay u baahan yihiin ee xayawaanka bakhaarka ah waxay noqon doonaan eeyo wehel ah, laakiin laguma taliyo dadka intiisa badan, maxaa yeelay intooda badani ma haystaan ​​waqti iyo xoog ay ku geliyaan. Dib-u-soo-celinta ayaa sida ugu fiican ugu falcelisa qaab aad u adag oo adag laakiin qaab deggan oo tababarka ah. Iyagu waa caqli badan yihiin oo dhaqsa ayey wax u bartaan, laakiin waxay noqon doonaan kuwo madax adag oo oggalaansho haddii ay ka maskax roon yihiin aadanaha. Tababarku waa inuu noqdaa mid jilicsan, laakiin adag oo waa inuu bilaabmaa da 'yar inta eygu weli yar yahay oo ku filan inuu maareeyo. Iyagu sidoo kale waa ilaaliyeyaal aad ufiican, laakiin looma soo jeedin eeyaha ilaaliyaha ah. Waxay aad u ilaaliyaan milkiilayaasha. Tan waa in wax laga qabtaa inta lagu guda jiro tababarkooda hore. Noocani wuu ka sii badnaan karaa wax duminaya marka loo eego Shaybaarka haddii aan la siinin jimicsi ku filan oo aan lagu qancin in bini-aadamku yihiin shakhsiyadiisa awoodda u leh. Ha ka badin noocyadan. Marka la bixiyo eeygan inuu la kulmo bisadaha iyo xayawaannada kale markuu da 'yar yahay, wixii dhibaato ah ee ka iman kara waa laga hortagi doonaa. Dib-u-celinta waxay sameysaa saaxiibbo orod fiican.
Dhererka: Ragga 25 - 27 inji (63 - 69 cm) Dumarka 24 - 26 inji (61 - 66 cm)
Miisaanka: Ragga 80 - 90 rodol (36 - 41 kg) Dumarka 65 - 75 rodol (29 - 34 kg)
Rhodesian Ridgebacks waa nooc adag, oo iska caabin kara isbeddelada cajiibka ah ee heerkulka, si kastaba ha noqotee waxay u nugul yahiin sinta dysplasia, sinjiga dermoid iyo finanka. Sidoo kale u nugul burooyinka unugyada .
Rhodesian Ridgebacks waxay ku fiicnaan doontaa guri dabaq ah illaa iyo inta ay helayaan jimicsi ku filan. Iyagu gudaha kama hawlgalaan waxayna ku fiican yihiin daarad weyn.
Eeyahaani waxay leeyihiin adkeyn weyn waadna daali doontaa waqti dheer kahor intaysan sameyn. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer, socod degdeg ah ama orod. Intaas waxaa sii dheer, waxay u baahan yihiin fursad badan oo ay ku ordaan, oo laga doorbido xarigga aag aamin ah. Haddii eeyahaas loo oggol yahay inay caajisaan, oo aan maalinna la socon ama laynin, waxay noqon karaan kuwo wax dumiya oo waxay bilaabaan inay soo bandhigaan dad badan oo dhibaatooyinka habdhaqanka .
Qiyaastii 10-12 sano
Qiyaastii 7-8 eeyo yaryar, celcelis ahaan 6
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Ku caday burush adag iyo shaamboo oo keliya markii loo baahdo. Noocani waa celcelis daadiya.
Rhodesian Ridgeback wuxuu asal ahaan ka soo jeeday Boqortooyada Matabele ka hor inta uusan noqon Rhodesia ka dibna Zimbabwe. Waxay u shaqeysay sidii eey ugaarsi ah iyo ka noqosho badan, wuxuu daryeelay carruurta iyo ilaalin jiray hantida. Waxay ka soo degtay iskutallaabtii u dhexaysay eyda dib u celinta leh ee ay soo dejiyeen deggeneyaashii Boer qarniyadii 16aad iyo 17aad oo markii hore ay ilaalin jireen qabiilooyinka ku dhaqan Koonfur Afrika oo ay weheliyaan noocyo sida Khoikhoidog, Mastiff , Deerhound iyo suurto gal ah Daanyeer Weyn . Halbeeggeeda, oo lagu hagaajiyay Matabeleland, wuxuu bilaabmay 1922. Reverend Helm wuxuu labo Ridgebacks ku soo galiyay Matabeleland sanadkii 1877. Ugaadhsadayaal waaweyn oo ciyaarta ugaarsada ayaa dhawaan ogaaday, in haddii baakadaha loo adeegsado ay ku fiicnaayeen ugaarsiga libaaxyada faraska, sidaas awgeed magaca kale ee jiilka ayaa ah. Libaaxii Afrika. Eeyadu sifiican ayey u shaqeeyeen kuleylka Afrika ee maalintii iyo qoyaan, habeenno qabow. Noocaas waxaa loo keenay Mareykanka 1950. Rhodesian Ridgeback waxaa aqoonsaday xisbiga AKC 1955.
Koonfurta, AKC Hounds
ACR = Diiwaanka Canine-ka Mareykanka
AKC = Naadiga Kennelka Mareykanka
ANKC = Naadiga Kennelka Qaranka ee Australiya
APRI = Diiwaanka Xayawaanka Mareykanka, Inc.
CKC = Naadiga Kennelka Canadian
CKC = Naadiga Kaynta ee Qaaradaha
KCGB = Naadiga Kennel ee Boqortooyada Ingiriiska
NAPR = Diiwaangelinta Waqooyiga Ameerika ee Waqooyiga Ameerika, Inc.
NKC = Naadiga Daanyeelka Qaranka
NZKC = Naadiga Xayawaanka ee New Zealand
RRCUS = Rhodesian Ridgeback Club ee Mareykanka
Riana the Rhodesian Ridgeback qiyaastii 3 sano jir
Zuri (Sawaaxiliga loogu talagalay “quruxda badan”) eeyaha yar ee Rhodesian Ridgeback ee jira 8 toddobaad
Hannah, oo ah naadir madow oo nadiif ah Rhodesian Ridgeback — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Afarta bilood ee Rhodesian Ridgeback eeyaha ayaa ah Leo (hore) iyo Lucy (gadaal)
Eeg tusaalooyin badan oo ah Rhodesian Ridgeback
Sawirada Rhodesian Ridgeback 1
Sawirada Rhodesian Ridgeback 2
Sawirada Rhodesian Ridgeback 3
Noocyada Eyga Ridgeback
Eyda Afka madow
Macluumaadka Taranka Eeyaha Mastador iyo Sawirro
Schnug Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Brussels Griffon Dog Sawirada Taranka, 3
Liistada West Highland White Terrier Mix Eeyaha Taranka
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Eyga ee loo yaqaan 'St John's Water Dog Dog'
Macluumaadka Eyga Tilmaamaha iyo Sawirada
Caawinta iyo Korinta Eyyada, Eeyda Taranka, Eeyaha Dhalashada ilaa 3 toddobaad
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka ee loo yaqaan 'Japanese Chin Dog'
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Akita Chow
pug isku darka adhijir Jarmal for sale
shukulaatada labmaraner eeyo iib ah
isku darka shaybaarka madow leh rottweiler
lhasa apso isku darka collie soohdinta
dahabiga dahabka ah ee eyda isku dhafka ah ee isku dhafka ah ee yar yar ee iibka ah